Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo ay la soo daristay Halis Caafimaad | Keydmedia
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo ay la soo daristay Halis Caafimaad
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegayaa in uu la tacaalayo xanuun dhanka neerfaha ah, sida Keydmedia Online ay ka soo xigatay ilo diblomaasi oo ku sugan Xalane oo ka gaabsaday in aan magacooda la sheegin.
Arrintan oo ah mid aysan wali ka hadlin Xukuumadda ayaa abuurtay walaac, gaar ahaan, taageerayaasha RW Xasan oo aan ka muuqan xafladihii 1-da Luulyo ee lagu qabtay Muqdisho.
Xasan Cali Kheyre ayaa haatan ku sugan dalka Qatar, mana jiraan wax cadeynaya in safarkiisa deg-degga uu ahaa mid hore loo qorsheeyay.
Halistan caafimaad ayaa aheyd mid soo jiitameysay intii mudo ah, kadib markii uu dhowr jeer ka dhacay sarajoogga, isla markaana loola cararay Isbitaal Digfeer xili habeen ah sanadkii tagay. Xanuunkan oo aan la shaacin ayaa la sheegayaa in uu la xiriiro dhanka neerfaha, mana jiraan dhaqaatiir heer caalami ah oo wax kaga qaban kara dalka gudihiisa.
Dad ku dhow Xasan Cali Kheyre, xilalna ka haya Xukuumaddiisa, oo ay Keydmedia Online wax ka weydiisay arrintan ayaa ku tilmaamay in ay ugu wacan tahay nasiino la’aan iyo cadaadis fara badan oo dhanka siyaasadda ah oo beryahan soo wajahay.
Keydmedia Online waxay isku dayday in ay la xiriirto Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha balse wax jawaab ah kama aysan helin.
Wixii soo kordha oo arrintan la xiriira, kala soco KEYDMEDIA ONLINE.